Technologies ezintsha Ngaba sebeza Sombulula Scalability Bitcoin kaThixo
Ngoku AMP ajoyine iqela nentaphane izikimu kunye nobugcisa ezintsha ithembisa ukusombulula ingxaki scalability Bitcoin kaThixo. Ezinye iinketho ziquka SegWit, Schnorr amakhasi, no Lightning Network.
I-AMP protocol wayeza ukusebenza phezu Bitcoin Lightning Network. Lightning Network yinkqubo amagunya evumela nxaxheba ukuphumeza amajelo micropayment trustless ozakuphunyezwa, off-blockchain, elinye okanye iintengiselwano intlawulo multiple.
Ezi ndlela abahlala ngaphandle Bitcoin blockchain. Intengiselwano kuqhubeka phakathi imiphantsi. Lwakugqitywa, zezi ntengiselwano kudluliselwa, njenge transaction eyodwa, ukuya blockchain.
Segwit yenye Bitcoin seglosi ezibalulekileyo ukuphucula scalability Bitcoin kunye nokunciphisa imirhumo yorhwebelwano Bitcoin kaThixo. SegWit uza kunceda ekuphuculeni Lightning Network kaThixo katsaka malleability.
Ekubeni kusebenze SegWit e-Agasti 2016, ababhekisi phambili aye ngokuya ukudibanisa SegWit zibe Bitcoin izipaji, kunye nokwabelana eziliqela sele aphumeza SegWit. osanda, ku February 5th, 2018, Coinbase wabhengeza ukuba ikwinqanaba lokugqibela lovavanyo sele iqalile yaye Segwit iya kufumaneka ukuze Coinbase abathengi kwiiveki ezimbalwa ezizayo.
AMP yenye yesikimu, kunye ne Lightning Network, uthembisa ukuba kunceda ukusombulula umba scalability Bitcoin kaThixo. Bitcoin abathanda kunye nabatyali silindele ukuba AMP ziya kufumana inkxaso kuwo onke amaqela achaphazelekayo crypto siqhubekele phambili ngempumelelo.
Ucinga ukuba Iintlawulo Atomic Multi-Indlela phezu Lightning Network iza kuba nefuthe imirhumo yorhwebelwano Bitcoin kunye ngesantya? Masazi kule izimvo ngezantsi.
Post Previous:Asingabo bonke abasebenzi baya kusinda bitcoin ekunciphiseni iindleko
Post Next:ukuba ukuvalwa kweentengiso crypto on Facebook kuya kukunceda njani ushishino
UTshazimpuzi 24, 2018 e 6:48 AM